IFM, CGM … : mitohy ny fahanginan’ny efitrano fampisehoana | NewsMada
IFM, CGM … : mitohy ny fahanginan’ny efitrano fampisehoana
Mbola hangina tanteraka ny eto Antananarivo sy ny manodidina, eny hatrany amin’ny faritra sasantsasany, ato anatin’ny roa herinandro. Mitohy ny tsy fahazoana mamory olona noho ny tsy mbola fahafehezan’ny fanjakana ny fihanaky ny aretina pesta.
Taorian’ny fanapahan-kevitry ny fanjakana, ny herinandro lasa teo, nofoanana avokoa ny hetsika rehetra tokony hotanterahina, ao amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely. Anisan’izany ny fampisehoana iarahan’i Nabalüm sy i Sanzy, mpanakanto avy atsy Afrika, ny 10 novambra izao.
Tsy ny seho an-tsehatra ihany no tratran’izao fanapahan-kevitra tsy maintsy noraisina izao fa hatramin’ny fampirantiana sy ny famelabelaran-kevitra samihafa ary ny toeram-pamakiam-boky sy fanovozam-pahalalana, ao amin’ity foibe ity. Hampahafantarina miandalana ny hiverenan’ny zava-drehetra amin’ny laoniny.
Ho an’ny ao amin’ny Cercle germano-malagasy (CGM), nahemotra ny 10 novambra izao, araka ny efa nambara teto, ny fampisehoan’i Baba, tokony hatao ny zoma 27 oktobra. Tsy hisy koa ny hetsika fanaon’ny Faribolana isam-bolana, amin’ity oktobra ity. Voatazona kosa ny hetsika iarahana amin’i Teddy Prezeau, ny 4 novambra, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ity toerana ity.
Etsy ankilan’izay, tsy vitsy ireo mpikarakara lanonana na fampisehoana tsy mbola milaza ny daty hanemorana ny hetsika karakarain’izy ireo, izay voatery nahemotra, noho ity aretina pesta ity ihany. Ny antony, mbola miankina amin’ny fivoaran’ny fihanaky ny aretina sy ny fanapahan-kevitry ny fanjakana, mikasika izany, ny fitadiavana ny daty. Eo koa ny fahafahan’ilay artista hiaka-tsehatra na tsia.